Colorado ရှိအကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများ! - ULLER
Colorado ကိုစဉ်းစားဖို့ဆိုတာနှင်းလျှောစီး၊ ပြီးတော့? မယုံနိုင်လောက်အောင်သဘာဝဖလားများနှင့်အဆင့်တိုင်း၏ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများရှိသည့်၎င်း၏တောင်တန်းများသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးနှင်းလျှောစီးနှင်းလျှောစီးနှင်းနှင့်အခြားဆီးနှင်းအားကစားလေ့ကျင့်သူများနှစ်သက်ကြသည်။
၎င်း၏တောင်စောင်းအပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာလျှောလေကောင်းလေထဲထည့်ပါ colorado အတွက်နှင်းလျှောစီး အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ခံစားမှုပါ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများနှင့်အားကစားသမားများသည်မတူနိုင်သည့် adrenaline အလုအယက်ခံစားရန်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကျောက်တောင်တန်းများတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သောတောင်ထိပ်သည်စွန့်စားခန်းတိုင်းကြုံတွေ့ရမည့်စွန့်စားခန်းနှင့်တူသည်။ ဒီမယုံနိုင်လောက်တဲ့နှင်းလျှောစီးနေရာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ ကော်လိုရာဒိုအပန်းဖြေစခန်းများတွင်နှင်းလျှောစီးခြင်း၏အတွေ့အကြုံသည်ဘာလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
Aspen သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကော်လိုရာဒိုပြည်နယ် Pitkin ကောင်တီတွင်တည်ရှိသောမြို့ဖြစ်ပြီး Aspen Skiing Company စတင်သောအခါဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်နှင်းလျှောစီးလေ့ကျင့်ခြင်းခံရသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်ဤမြို့သည်အားကစားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အလွန်အရေးပါသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးနှင်းလျှောစီးခြင်းကဲ့သို့သောအခြားဆီးနှင်းအားကစားများတွင်လည်းလည်ပတ်စေသည်။
Aspen မြို့သည်အပန်းဖြေစခန်းလေးခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုမရှိသော်လည်းမြို့တစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်။ သင်၏အတွေ့အကြုံမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူနှင်းလျှောစီးအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ဘတ်ဂျက်သည်အမြင့်ဆုံးမဟုတ်လျှင်အရေးမကြီးပါ၊ သင်ကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်သောနှင်းလျှောစီးစင်တာနှင့်သင်သွားရသောရာသီပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ဒီမြို့မှာလူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ်။
စွန့်စားရှာဖွေသူများက Buttermilk ဘူတာနှင့်အောက်ခြေ Snowmass ဘူတာတွင်သူတို့၏စံပြနေရာကိုရှာဖွေရန်သေချာသည်။ နှင်းလျှောစီးခြင်းတွင်အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသူများသည်၎င်းတို့၏မြင့်မားသောဒေသများရှိ 'Highlands' နှင့် 'Snowmass' သို့သွားရန်အလွန်ကောင်းလိမ့်မည် အကယ်၍ သင်သည်အဆင့်မြင့်အဆင့်ရှိကျွမ်းကျင်သည့် Skier တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးဖြစ်ပါကသင်ရွေးချယ်သင့်သည် Aspen တောင်တန်းပန်းကန်လုံးကို 'Highlands' ဘူတာမှ ဖြတ်၍ မရပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကြောင်းအရာအားလုံးကိုနောင်တွင်အသေးစိတ်ပြောပါမည်။
USP နှင့် ASPEN ရှိအကောင်းဆုံးနေရာများကိုရှာဖွေပါ။
Aspen တောင်တန်း (Ajax)
The Aspen တောင်တန်းဘူတာရုံ ဒီမြို့ရဲ့ပထမဆုံးနှင်းလျှောစီးစင်တာပဲ! ငါတို့တွေ့ပြီမြို့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး ၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သူအများစုအတွက်အလွန်ခက်ခဲသောအပုဒ်များကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ တကယ်တော့, Aspen တောင်တန်း ၎င်းသည်စာသင်ခန်းအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလယ်အလတ်၊ အဆင့်မြင့်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်များစွာ၏တောင်စောင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့်ထို့ကြောင့်ဤသဘောမျိုးဖြင့်မျှမျှတတသီးသန့်နှင်းလျှောစီးစင်တာဖြစ်သွားသည်။ Aspen တောင်တန်း သူတို့ရဲ့အားဖြင့်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြောင်း 76 ပုဒ်စုစုပေါင်းရှိပါတယ် ဓာတ်လှေကားနှင့်၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းသည်မြို့တော်နှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။ သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့အံ့သြဖွယ်ဘူတာရုံ!
Aspen - ထောပတ်
La ထောပတ်ဘူတာအကယ်၍ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အပြာရောင်နှင့်အနီရောင်တောင်စောင်းများကမ်းလှမ်းပါကနှင်းလျှောစီးလောကတွင်စတင်ရန်၊ သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်နှင့်ယင်း၏ adrenaline အားလုံးကိုပျော်မွေ့ရန်အထူးသဖြင့်အကြံပြုထားသော၊ ပိုက်(လှည့်ကွက်များအတွက်ပြွန်) နှင့် ရေတံခွန် (ဆီးနှင်းပန်းခြံများ) ။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုကြောင့်လူကြီးများနှင့်ကလေးများအတွက်ရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူအလွန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စင်တာပါစေ။ The ထောပတ်ဘူတာ ၎င်းကို Aspen Highlands သို့၏မြောက်ဘက်တွင်တွေ့ရှိရပြီး၎င်းသည်အနိမ့်အမြင့်ရှိသည်။ မိသားစုခရီးစဉ်အတွက်အရမ်းကိုအေးအေးဆေးဆေးပါပဲ၊
Aspen - ကုန်းမြင့်မြင့်
Highland Peak နှင့် Loge Peak (မြို့မြောက်ဘက်) တွင်တည်ရှိသည်။ Aspen Highlands သို့ ၎င်းသည်အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်ဆင်ခြေလျှောများဖြင့်မြင့်မားသောတောင်ပေါ်နှင်းလျှောစီးကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအတွက်ထင်ရှားသည်။ ၎င်းသည် Highland Bowl၊ Olympic Bowl နှင့် Steeplechase အပါအဝင်အားကစားနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေရှိသော၎င်း၏သဘာဝတောင်စောင်းများနှင့်ဖလားများကိုစိန်ခေါ်ရန်ရှာဖွေနေသည့်မြင်းစီးသူရဲများအားအလွန်လည်ပတ်သည်။ အစွန်းရောက်အတွေ့အကြုံများသင်၏အရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ဒီသံသယမရှိဘဲသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်!
Apen - နှင်းလျှောစီး
ဒီနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းစနိုးမဒ်ကျေးရွာနှင့်နီးသည်။ ၎င်းသည်ဤမြို့၏အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီး၊ Aspen ၏လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အဆင့်အားလုံးအတွက်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသောလမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်။ သင်ကအစပြုသူသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်များနှင့်အတူလာရောက်လည်ပတ်လျှင်ပင်၎င်းသည်စီးနှင်းသူအားလုံးအတွက်အလွန်အေးမြသောနှင်းလျှောစီးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွမ်းကျင်မှုအရှိဆုံး skiers များအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေသောမြင့်မားသောတောင်စောင်းများကိုလည်းသင်တွေ့နိုင်သည်။ The စနိုးမင်ကွင်း ၀ ယ်ရန်စားသောက်ရန်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စျေး ၀ ယ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောလေထု၊ အရာအားလုံးရှိတယ်!
Aspen နှင်းလျှောစီးပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အပြည့်အ ၀ နှင့်ထူးခြားသည့်အတွေ့အကြုံရရှိရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တကယ်တော့နှင်းလျှောစီးနေရာတိုင်းမှာပါ! ထို့အပြင်၎င်းသည် visitors ည့်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက်ဘူတာများနှင့်ခရီးသွားခြင်းအကြောင်းရင်းများ (စွန့်စားမှု၊ မိသားစု၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းသို့မဟုတ်သင်ယူမှု) အတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်နှင့်သင်၏အပေါင်းအသင်းများနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မည့်နေရာကိုသင်သေချာသိပြီးဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏ဘူတာအားလုံးကိုသင်လည်ပတ်နိုင်မည်မှာသေချာသည်။ အမှန်တရားကတော့၊ အကယ်၍ မင်းသည်နောက်ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်တွင်ပြည်ပ၌နှင်းလျှောစီးခရီးစဉ်ကိုသွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ လုပ်သာလုပ်!
ထဲမှာ ကြေးနီတောင်တန်းဘူတာရုံ, Denver (ကော်လိုရာဒို၏မြို့တော်) ၏အနောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ နှင်းလျှောစီးအပြင်အခြား the ည့်သည်များနှင့်ဒေသခံများသည်နှင်းလျှောစီးခြင်းအပြင်လှုပ်ရှားမှုများစွာကိုနှစ်သက်သောနေရာတွင်ကောင်းမွန်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုစောင့်မျှော်နေပြီး၎င်းသည်အရောင်များနှင့်အဆင့်များရှိတောင်စောင်းများစွာတွင်လေ့ကျင့်နိုင်သည်။ စုစုပေါင်းပုဒ်ပေါင်း ၁၅၂ ပုဒ်အတွက်ရိုးရိုး ၇၇ ခု၊ ​​အလယ်အလတ် ၅၀ နှင့်ခက်ခဲသောပုဒ်မ ၂၅ ခုကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သူတို့၏ဖလားများကိုအားကစားကျွမ်းကျင်သူအများစုကလိုလားတောင့်တသည်။ တောင်ကြားတွင်သဘာဝလမ်းဖြင့်ဖွဲ့စည်း ထား၍ ပျော်စရာအတွက်အဆင်ပြေသည်။ skiers ၏ခြေနင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊
Frisco (Summit ကောင်တီ) မှ ၈ မိုင်ခန့်တွင်တည်ရှိသောကြောင့်အနီးအနားရှိမြို့တွင်တည်းခိုရန်ရွေးချယ်စရာများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်ခရီးစဉ်အတွင်းသင့်ဘတ်ဂျက်ကိုလျှော့ချရန်စီစဉ်ထားသည်။ Frisco တွင်ပြတိုက်များ၊ တောင်တက်ဒေသများနှင့်နှင်းဖုံးပန်းခြံများအပါအ ၀ င်ခရီးသွားအပန်းဖြေရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည်။ သို့သော် ကြေးနီတောင်တန်းဘူတာရုံ ၎င်းတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖျော်ဖြေရေးအဆောက်အအုံများ၊ တည်းခိုခန်းများနှင့်စားသောက်ဆိုင်များရှိသည်။ သင့်အားအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်အောင်နေရာ ၃ နေရာတွင်ဖြန့်ဝေပေးသည်။ အရှေ့ကျေးရွာ၊ ကြေးနီကျေးရွာနှင့်အနောက်ကျေးရွာတို့တွင်ဖြစ်သည်။
ဒီဘူတာရုံရဲ့အမြင့်ကမီတာ ၃၀၀၀ လောက်ရှိတယ်ဆိုတာသတိရဖို့သတိရပါ။ ဒါကြောင့်သင်ဟာဒီသီချင်းကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပြီးသင်ဟာအစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ခရီးစဉ်မှပျော်စရာကိုယူဆောင်သွားခြင်းကိုခွင့်မပြုသင့်ပါ။
La ဆောင်းရာသီပန်းခြံအပန်းဖြေစခန်း, "ကော်လိုရာဒို၏အနှစ်သက်ဆုံး" ကိုရည်ရွယ်သည် အဓိကအားဖြင့်အဆင့်မြင့်နှင့်အလယ်အလတ်နှင်းလျှောစီးအဆင့်အတန်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းဥယျာဉ်သည်သင့်အားအရှေ့ဘက်ခြမ်းမှဆောင်းရာသီမုန်တိုင်းများကိုလက်ခံခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်း၏အားသာချက်ကိုပေးသည့် Continental Divide နှင့်အတူအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? သူတို့အဲဒီမှာပိတ်မိနေပြီးတောင်စောင်းတွေကိုပျော်မွေ့ဖို့အတွက်ဆီးနှင်းတွေထပ်ထည့်လိမ့်မယ်။
ဘူတာရုံFront Range (Denver မှမိနစ် ၉၀ ခန့်) အနီးတွင်တည်ရှိသည် နှင်းလျှောစီးတစ်နေ့လျှင်လူ ၁၀၀၀၀ ကျော်လက်ခံနိုင်သည့်ရထားများ၊ ဓာတ်လှေကားများဖြင့် ဆက်သွယ်၍ ဆက်သွယ်မှုအမြင့်ဆုံးသုံးခု (Winter Park, Mary Jane နှင့် Vasquez Ridge) ၎င်းတွင်စျေးအသက်သာဆုံးမှအမြင့်ဆုံးဇိမ်ခံကားအထိအထိအပန်းဖြေနိုင်သောနေရာများရှိသည်။ သစ်တော၏လျှို့ဝှက်အခန်းများနှင့်အခန်းများကိုသင်တွေ့ရှိပါကအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ အောက်မြို့ဆောင်းရာသီပန်းခြံ!
ကုလားကာ (VAIL SKI RESORTS)
La Vail နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း ၎င်းသည်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည် Colorado နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံး၌တတိယအကြီးဆုံး။ ၎င်းသည် Vail မြို့အနီးတွင်တည်ရှိသည် လင်းယုန်ကောင်တီ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤကြီးစွာသောနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းသို့သွားရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်၎င်းသည်ဖြစ်လိမ့်မည်မှာသေချာသည် သင်ရွေးချယ်နိုင်သောအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ Front-Side၊ Blue Sky Basin နှင့် Black Bowls တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဘူတာတွင်အဆင့်မြင့်အဆင့်များအတွက်လမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်နှင်းလျှောစီးကျွမ်းကျင်သူများစွာသည်ယင်းကိုလည်ပတ်ကြသော်လည်းအလယ်အလတ်နှင့်စကရင်စီးသူများအနေဖြင့်သင့်ကိုစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောတောင်စောင်းများဖြစ်မည်ဆိုလျှင်သင့်ကိုစိတ်ပျက်စေမည်မဟုတ်ပါ။
ထို့အပြင် Vail ချိုင့်၌မြို့များနှင့်မြို့ကြီးများပါ ၀ င်သောဘူတာရုံတစ်ခုသည်အလွန်ကိုလှပသောကိုလိုနီခေတ်ပုံစံဖြင့်တည်ရှိပြီးသင်မထင်မှတ်ထားသောအရာများဖြစ်သည်။ စျေးဝယ်ခရီးစဉ်များနှင့်ညဥ့်နက်များသည်အလွန်ဇိမ်ကျကျကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ တည်းခိုခန်းများ၊ ဟိုတယ်များ၊ အိမ်များ၊ Cabin များနှင့်ကွန်ဒိုမီနီယံများအပါအ ၀ င်ရာနှင့်ချီသောတည်းခိုခန်းရွေးချယ်စရာများကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်စရာများကြောင့်ဘတ်ဂျက်အားလုံးနှင့်အရသာများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်စင်တာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဈေးအကြီးဆုံးနှင်းလျှောစီးပတ်ပတ်လည် Colorado။ ဒီနှင်းကျခြင်းအတွေ့အကြုံကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးပျော်မွေ့ဖို့အခွင့်အရေးရှိရင်ဒါကိုသင်နောင်တမရပါဘူး။ သင်တစ် ဦး နှင့်အတူနေလျှင် ဘတ်ဂျက် အကန့်အသတ်ရှိ, သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအားလုံးနီးပါးကီလိုမီတာကွာနေသောဘူတာရုံအနီးရှိမြို့များ၌နေထိုင်ရန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်ဌသိခဲ့သလားa၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ပြီးနောက်ဗေးလ်မြို့ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်မြို့သည်ခရီးသွား and ည့်သည်များနှင့်၎င်းတို့အားလာရောက်လည်ပတ်သူများအားလုံးလုံးလျားလျားအာရုံစိုက်ထားသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Vail နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း ၎င်းကိုအခြားအရာသုံးခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်အေးမြသောနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုလွတ်လပ်သည်ဟုယူဆကြသော်လည်း၎င်းကို Vail Resorts ကုမ္ပဏီမှထိန်းချုပ်သည်။ ဤတွင်သင့်အားသူတို့အကြောင်းအနည်းငယ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ထားခဲ့သည်။
El Beaver အဘိဓါန် Creek အဘိဓါန်အပန်းဖြေစခန်း ၎င်းသည် Vail မှမိနစ် ၂၀ ကျော်ဝေးသော Avon မြို့နှင့်အလွန်နီးသောနေရာတွင်ရှိသည်။ ဒီဘူတာကဇိမ်ခံပစ္စည်းတိုင်းကိုအဓိပ္ပာယ်တူတယ်။ အဲဒါကသူ့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်စတိုးဆိုင်များ၊ လမ်းလျှောက်နေစဉ်အတွင်းသင်ဖြတ်သန်းတွေ့ရတဲ့အနုပညာပြခန်းများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘူတာရုံ၏လေထုတစ်ခုလုံးတွင်ထင်ဟပ်နေသည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုဇိမ်ခံဆုံး၊
အနီးအနားရှိအပန်းဖြေစခန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဤနှင်းလျှောစီးစင်တာသည်အရွယ်အစားအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း၎င်းသည်အဆင်ပြေပြီးကျယ်ဝန်းသည်။ အမှန်မှာ၎င်းတွင်မတူညီသောကျေးရွာ ၃ ရွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောနှင်းလျှောစီးတောင်တစ်ခုရှိသည်။ စိတ် ၀ င်စားပါက၎င်းကမ်းလှမ်းထားသည့်လမ်းကြောင်းအများစုသည်အလယ်အလတ်အဆင့်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်အဆင့်မြင့်ခြင်းနှင့်အစပြုသူအဆင့်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာများပေးထားသည်ကိုသတိရပါ။ ပြီးတော့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့မယုံနိုင်လောက်တဲ့ရေခဲစကိတ်ကွင်းကိုသင်မလွတ်နိုင်ပါ!
BRECKENRIDGE နှင်းလျှောစီး RESORT
Breckenride ဘူတာကိုပုံမှန်အားဖြင့်“ Breck” ဟုရည်ညွှန်းပြီး Summit ကောင်တီရှိ Summit ကောင်တီတစ်ခုလုံးကိုထိပ် ၅ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည်နှစ်စဉ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အများဆုံးလည်ပတ်သည့်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှင့် Breckenridge အတွက်အတွေ့အကြုံကသင်၏အရသာနှင့်ဘတ်ဂျက်အားလုံးနေရာထိုင်ခင်းအခြားနည်းလမ်းနှင့်အတူသာယာမြို့များလျှင်, စံပြပတ်ဝန်းကျင်ကမ်းလှမ်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်သောနှင်းဖုံးနေသောမြေအနေအထားဖြစ်ပြီးကျွမ်းကျင်သော၊ အဆင့်မြင့်နှင့်အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသောတောင်စောင်းများရှိသည်။ သင်သည်နှင်းလျှောစီးကျောင်းမှသင်ယူသူများအတွက်တောင်စောင်းများကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ပန်းခြံများကိုသင်ပျော်ရွှင်ခံစားနိုင်သည် အခမဲ့ပုံစံ အပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာမှာလျှောနှင့်ခုန်ဖို့သေတ္တာများနှင့်ရထားလမ်းနှင့်အတူပိုမိုစွန့်စားဘို့, သင်သည်သင်၏လာမည့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့ပြေးနိုင်သည့်အတွက်။
ဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းကို Denver နဲ့အလွန်နီးစပ်တဲ့ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်၊ ကီးစတန်မြို့မှာတွေ့နိုင်တယ်။ ၎င်း၏စင်တာသည်နှင်းလျှောစီးအတွက်အကောင်းဆုံးတောင်တန်း ၃ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အဓိကအားဖြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်တောင်စောင်းများရှိသည်။ အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့်လူသစ်အဆင့်များအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုပေးထားသည်။ The သော့ချက်ကျဘူတာ အထူးသဖြင့်နေ့ရောညပါပါကျော်ကြားသောကြောင့်ဖြစ်သည် ညနှင်းလျှောစီး (ညနှင်းလျှောစီးခြင်း)၊ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးတောင်စောင်းအချို့သည်ညအချိန်တွင်နှင်းလျှောစီးရန်အထူးသင့်တော်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရမ်းစူတယ်။
Keystone Resort တွင်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စျေးဝယ်ရန်အတွက်စျေး ၀ ယ်ရန်အတွက်စျေး ၀ ယ်ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများ၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသောတည်းခိုခန်းများနှင့်တည်းခိုစရာရွေးချယ်စရာများအပြင်သင့်ရဲ့အရသာနှင့်ဘတ်ဂျက်နှင့်ကိုက်ညီသောရွေးချယ်စရာများကိုလည်းသင်တွေ့နိုင်သည်။ စျေးသက်သက်သာသာနှင့်စျေးအသက်သာဆုံးမှအမြင့်ဆုံးဇိမ်ခံကားများနှင့်အဆင့်မြင့်တောင်တန်းကွန်ဒိုမီနီယံများနှင့်ပုဂ္ဂလိကအိမ်များသို့သွားပါ။
ဒါ့အပြင်ဒီ colorado အတွက်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း မြင်းစီးရန်နေရာများကမ်းလှမ်းသည်, တောင်ကြီးတောင်ငယ်ပန်းခြံ၊ ညီလာခံပေးရန်ဂေါက်ကွင်းနှင့်နေရာများ။ အနီးအနားရှိရေကန်လည်းရှိသည် မိနစ်အနည်းငယ်အကွာမှာပဲ၊ အေးခဲသည့်အခါရေခဲစကိတ်ကွင်းကိတ်ကွင်းဖြစ်လာသည့်အခါ။ မင်းသူတို့ကိုလွမ်းလို့မရဘူး
"The Basin" သို့မဟုတ် "A-Basin" ဟုလူသိများသည် Arapahoe ဝှမ်းနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း အတွင်းရှိ White River National Forest တွင်တည်ရှိသည် Colorado။ ၎င်းသည်အများစုသည်အဆင့်မြင့်သောတောင်စောင်းများဖြစ်သောကြောင့်နှင်းလျှောစီးနှင်းနှင့်နှင်းလျှောစီးခြင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အပန်းဖြေစခန်းတွင်အလယ်အလတ်လမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုများနှင့်စကိတ်ကျောင်းကိုပင်ရှာသောစတင်သူများနှင့်သင်ယူသူများအတွက်လွယ်ကူသောအဆင့်များကိုသင်တွေ့ရသည်။
Basin ဘူတာကိုအနှစ်သက်ဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာသင်သည်ဇွန်လအစောပိုင်းအထိစီးနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ဇူလိုင်လအထိနှစ်အနည်းငယ်အထိကြာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အခြားဘူတာများထက်သုံးလကြာသည့်အခါ၎င်းသည်တံခါးများကိုဖွင့်ပေးလေ့ရှိသည်။
အကယ်၍ သင်၏နောက်နှင်းလျှောစီးခရီးစဉ်တွင်သင်ကြည့်ရှုလိုပါက၎င်းတွင်ကိုယ်ပိုင်တည်းခိုစရာနေရာမရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ ဥပမာကီးစ်အပန်းဖြေစခန်းသို့မဟုတ်အနီးအနားရှိမြို့ကြီးများရှိနှင်းလျှောစီးawayရိယာနှင့် ၂၀ မိနစ်သာဝေးသောနေရာတွင်နေထိုင်ရမည်။ Silverthorne, Breckenridge နှင့် Dillon ။
La ချစ်စနိုးဘူတာရုံ မင်းကဂျော့ချ်တောင်းနဲ့အရမ်းနီးတယ် Colorado, ထို Loveland ချိုင့်တက်လုပ်။ , နှစ် ဦး စလုံးကြောင်း Loveland ဝှမ်း သူတို့တစ် ဦး တည်းသာဘတ်စ်ကားစီးရုံတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားချိတ်ဆက်ပါ။ The မြင်းစီး အမြင့်ဆုံးမှာ Loveland သို့အလည်အပတ်ခရီးမလာသည့် ၄၀၀ '' ရှိသောလမ်းများနှင့်ဖလားများထဲသို့စီးဝင်သောမတ်စောက်သောတောင်စောင်းများအတွက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ဖလားဖွင့်လှစ်။ ကော်လိုရာဒိုရှိအခြားနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများတွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သောအရာသည်ဆီးနှင်းများစွာပိုမိုများပြားနိုင်သည်။
ဒီနေသော်လည်း, အစပြုသူ skiers အတွက်ရှာကြဘူး Loveland အထူးသဖြင့်theရိယာတွင်တောင်စောင်းများပါ ၀ င်သော်လည်းမတ်စောက်မှုနည်းသည် Loveland ချိုင့်ဝှမ်း။ ၎င်းသည်အောက်တိုဘာလမှမေလအထိရာသီများကိုကမ်းလှမ်းသောကြောင့်၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ယခုနှစ်တွင်သူတို့တံခါးဖွင့်ရန်ပထမဆုံးသောဘူတာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤမြို့တွင်ရိုးရိုးဟိုတယ်နှင့်ဇိမ်ခံကွန်ဒိုမီနီယံများ၏ရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူသက်သောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာနေထိုင်ရန်အတွက်နေရာအမျိုးမျိုးရှိသည်။ Georgetown မြို့မှာအကောင်းဆုံးနေရာရအောင်သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
သတိရပါဖြေ။ ။ နှင်းလျှောစီးရာသီဟာကော်လိုရာဒိုရှိအပန်းဖြေစခန်းများသို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးသောလတွေဖြစ်တဲ့နို ၀ င်ဘာလနဲ့Aprilပြီလကြားမှာဖြစ်တယ်။ နှင်းလျှောစီးသည်အန္တရာယ်များသောအားကစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်လိုအပ်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုလည်းသတိပြုပါ။
ဤ blog ၏အစတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Arapahoe Barin နှင့် Loveland အပန်းဖြေစခန်းနှစ်ခုလုံးသည်တစ်နှစ်တာကာလများထက် ပိုမို၍ ဖွင့်လှစ်လေ့ရှိသော်လည်းအမှန်တရားမှာကားနှင်းလျှောစီးရာသီဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းသည်အမြဲဖြစ်သည် ၎င်းသည်ရာသီဥတုအခြေအနေအရဘူတာတစ်ခုစီ၏စီရင်ပိုင်ခွင့်အပေါ်မူတည်သည်။ များသောအားဖြင့်သူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ထိုနှစ်၌ကျသွားသောနှင်းပမာဏနှင့်ပမာဏအပေါ် မူတည်၍ တိကျစွာဆုံးဖြတ်သည်။
ဤမြို့သည်လှပပြီးအပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အထူးသဖြင့်သင်သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ခရီးသွားလျှင်၊ ဆီးနှင်းထဲတွင် adrenaline အလွန်များပြားပြီးနောက်အခြားသာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အားခဏအနားယူရန်ခရီးစဉ်၏အားသာချက်ကိုသင်ရယူနိုင်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်ဒင်းဗားမြို့နှင့်ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ရှိအခြားသောအတွေ့အကြုံများကိုရယူပါ။ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုအချို့မှာ -
ကော်လိုရာဒိုသို့နှင်းလျှောစီးခရီးစဉ်သည်အမြင့်ဆုံးသောပျော်ရွှင်မှုကိုပေးမည် လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် adrenaline!
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်တွင် Centennial State ဟုခေါ်တွင်သောအမြင့်နှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်ကြီးမားသောမိုးသက်မုန်တိုင်းများရှိနိုင်သည်။ သို့သော်နိုဝင်ဘာလမှAprilပြီလများအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောဘူတာများ၌စွန့်စားမှုရှာဖွေရန်ရှာဖွေနေသောထောင်နှင့်ချီသောနှင်းလျှောစီးများလက်ခံရရှိသည်။ နှင့်ဆီးနှင်းဆွဲဆောင်မှု။
နှင်းလျှောစီးခရီးစဉ်အတွက်သင်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူနိမ့်သောအပူချိန်အဘို့အစဉ်အမြဲအလွန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရမယ်နှင့်သတိရပါ ဘူတာရုံတွင်ပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ငှားသည်ဖြစ်စေသင့်လျော်သောအဝတ်အစားများနှင့်အတူ။ ထို့အပြင်မိုin်းပွင့်၌အလွန်အမင်းအားကစားသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ကောင်းမွန်သောသတိပေးမှုအခြေအနေကိုအမြဲတမ်းသိရှိထားရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အရေးကြီးသည်။
ယခုသင်ကော်လိုရာဒိုနှင်းလျှောစီးအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်ပိုမိုသိရှိပြီးပါကအကောင်းဆုံးရာသီကိုရွေးချယ်ပြီးသင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်အပန်းဖြေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီထက်ပိုပြီးမတွန့်ဆုတ်နဲ့ဒီစွန့်စားမှုခရီးစဉ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မခံစားရပါစေနဲ့။